ITUNES: NJEHIE 21 - ITUNES - 2019
Ụzọ iji dozie njehie 21 na iTunes
Ọtụtụ ndị ọrụ anụwo banyere àgwà nke ngwaahịa Apple, Otú ọ dị, iTunes bụ otu n'ime usoro mmemme ndị ahụ nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọrụ ọ bụla, mgbe ọ na-arụ ọrụ, izute ezughị okè na-arụ ọrụ. Isiokwu a ga-atụle ụzọ iji kpochapụ njehie ahụ.
Njehie 21, dị ka a na-achị, na-adabere na malfunctions ngwaike nke ngwaọrụ Apple. N'okpuru ebe a, anyị ga-ele anya ụzọ ndị nwere ike isi nyere aka dozie nsogbu ahụ n'ụlọ.
Ụzọ iji dozie njehie 21
Usoro 1: Melite iTunes
Otu n'ime ihe na-akpatakarị ọtụtụ njehie mgbe ị na-arụ ọrụ na iTunes bụ imelite usoro ihe omume ahụ na nsụgharị kachasị ọhụrụ.
Ihe niile ị ga - eme bụ ịlele iTunes maka mmelite. Ma ọ bụrụ na achọta mmelite dịnụ, ị ga-achọ itinye ha, wee malitegharịa kọmputa.
Usoro 2: gbanyụọ software antivirus
Ụfọdụ antiviruses na mmemme nchebe ndị ọzọ nwere ike ibute ụfọdụ usoro iTunes maka ọrụ ịrịa ọrịa, ma gbochie ọrụ ha.
Iji lelee ihe gbasara nke a nke njehie 21, ịkwesịrị iwepụ antivirus maka oge ahụ, wee maliteghachi iTunes ma lelee maka njehie 21.
Ọ bụrụ na njehie ahụ apụla, mgbe ahụ nsogbu ahụ na-adaba na mmemme ndị ọzọ nke na-egbochi omume iTunes. N'okwu a, ị ga-aga na ntọala antivirus ma gbakwunye iTunes na ndepụta nke ndị ọzọ. Tụkwasị na nke ahụ, ọ bụrụ na atụmatụ a nọ n'ọrụ, ị ga-achọ iwepụ nyocha nke netwọk.
Usoro 3: dochie eriri USB
Ọ bụrụ na ị na-eji USB USB na-abụghị nke mbụ ma ọ bụ nke mebiri emebi, mgbe ahụ ọ ga-abụ na ọ bụ ya kpatara njehie ahụ 21.
Nsogbu bụ na ọbụna akara ndị na-abụghị nke mbụ nke Apple kwadoro nwere ike mgbe ụfọdụ na-arụ ọrụ na-ezighị ezi na ngwaọrụ ahụ. Ọ bụrụ na USB gị nwere kinks, twists, oxidations, na ụdị ọ bụla ọzọ mebiri emebi, ị ga-achọkwa dochie eriri ya na otu ihe niile.
Usoro 4: Melite Windows
Usoro a enweghi ike inye aka idozi nsogbu ahụ na njehie 21, ma edepụtara ya na ebe nrụọrụ weebụ Apple gọọmenti, nke pụtara na a pụghị iwepụ ya na listi ahụ.
Maka Windows 10, pịa igodo ọnụ Na-emeri + mimepe window "Nhọrọ"wee gaa mpaghara "Imelite na Nche".
Na windo nke meghere, pịa bọtịnụ ahụ. "Lelee maka mmelite". Ọ bụrụ na ịchọta nlele maka mmelite dị, ị ga-achọ itinye ha.
Ọ bụrụ na ị nwere nsụgharị nke Windows, ị ga-aga menu "Ogwe njikwa" - "Windows Update" ma chọpụta mmelite ndị ọzọ. Tinye nkwalite niile, gụnyere nhọrọ.
Usoro 5: Weghachi ngwaọrụ site na ọnọdụ DFU
DFU - Ngwa Ngwa Ngwaọrụ mberede, nke na-achọ ime ka ngwaọrụ ahụ kwụsị. Na nke a, anyị ga-anwa itinye ngwaọrụ ahụ na ọnọdụ DFU, ma weghachite ya site na iTunes.
Iji mee nke a, kpochapụ ngwaọrụ Apple gị, wee jikọọ ya na kọmputa gị site na iji eriri USB ma malite iTunes.
Iji tinye ngwaọrụ ahụ na ọnọdụ DFU, ịkwesịrị igosi nchikota ndị a: jigide igodo ike ma jidere sekọnd atọ. Mgbe nke ahụ gasịrị, na-ahapụghị igodo mbụ, jide ala "Home" ma jide ma igodo maka 10 sekọnd. Mgbe ahụ ị ghaghị ịhapụ igodo ike ahụ, ma nọgide na-edebe "Home" ruo mgbe iTunes ga-ahụ ngwaọrụ gị (windo ga-apụta na ihuenyo, dịka e gosiri na nseta ihuenyo n'okpuru ebe a).
Mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-amalite ịmalite mgbake ngwaọrụ site na ịpị bọtịnụ kwesịrị ekwesị.
Usoro 6: kwụọ ngwaọrụ ahụ
Ọ bụrụ na nsogbu ahụ dị na batrị nke batrị Apple gadget, mgbe ụfọdụ, ọ na-enyere aka dozie nsogbu nke zuru ezu na-ebuba ngwaọrụ ruo 100%. N'ịgbaghara ngwaọrụ ahụ ruo na njedebe, gbalịa ọzọ iji megharịa ma ọ bụ melite usoro.
Na n'ikpeazụ. Ndị a bụ ụzọ ndị bụ isi ị nwere ike isi rụọ n'ụlọ iji dozie njehie. Ọ bụrụ na nke a enyereghị gị aka - ọ ga-abụ na ngwaọrụ ahụ kwesịrị ịrụzi, n'ihi na naanị mgbe emechara nyocha ahụ, onye ọkachamara ga-enwe ike dochie ihe ntụpọ ahụ, nke kpatara nsogbu ndị ahụ na ngwaọrụ ahụ.